ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : ချက်နိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆု ဦးမင်းကိုနိုင် လက်ခံ
ချက်နိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆု ဦးမင်းကိုနိုင် လက်ခံ
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် အကျဉ်းကျနေသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင်ကို ကွယ်လွန်သူ ချက်သမ္မတ ဗားဆလပ်ဟာဗဲလ်က ချက်နိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆု Homo Homini Award ကို ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ယခု ဆုကို ဦးမင်းကိုနိုင်က ချက်နိုင်ငံမြို့တော် ပရက်ဂ်တွင် ကိုယ်တိုင်သွားရောက်
လက်ခံရယူခဲ့သည်။ “It was Václav Havel who proved that the true love to humanity cannot be limited by nationalism, religion or discrimination. Me and Václav Havel, we were not close friends, we lived ten thousands kilometers far from each other. But under the roof of freedom, peace and human rights we were like family," ဟု စက်တင်ဘာ ၃ ရက် ဆုလက်ခံရယူသည့် အခမ်းအနားတွင် ဦးမင်းကိုနိုင်က ပြောသည်။ Homo Homini Award ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှ စ၍ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသများတွင် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် စွန့်စားလှုပ်ရှားသူများကို နှစ်စဉ်ချီးမြှင့်လာခဲ့ရာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်စုစုနွေး၊ ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း၊ ဒေါ်နီလာသိန်းတို့ကိုလည်း ပေးအပ်ခဲ့သေးသည်။
မူရင်း The Irrawaddy (Burmese Version)